Maxay Soomaalida Jigjiga uga caaggan tahay shaqooyinka faa’iidada leh? |
Maxay Soomaalida Jigjiga uga caaggan tahay shaqooyinka faa’iidada leh?
Deegaanno badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida waxaa laga cawdaa shaqo la’aan haysata dhallinyarada, hase ahaatee dhinaca kale waxay su’aal ka taagan tahay ma waxaa jirta shaqo la’aan mise waxaa jirta kala xulasho la xiriirta shaqooyinka, ama in howlaha qaar laga faano?
Shaqooyin badan oo ay dadka qabta sheegeen iney ka macaasheen, noloshoodana ku maareystaan ma aha shaqooyinka ay daneeyaan dhallinyarada Soomaaliyeed, waxayna u arkaan iney kuwaas u dhaanto shaqo la’aan.
Dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka iyo meelaha kale ee ay ka mid yihiin dowlad deegaanka Soomaalida, shaqooyinka xirfadda iyo xoogga u baahan ma aha kuwo ay daneeyaan.
Hase ahaatee waxaa ka faa’iideysta dadka kale ee aan Soomaalida ahayn, kuwaasoo aad ugu qanacsan qaarkoodna sannado badan ka shaqeeya.
Shaqooyinka noocaas ah ee la xusi karo waxaa ka mid ah Timojarista, Nadaafadda, Shaqada guryaha, Xamaaliga iyo kuwo kale oo fara badan.
Image captionHaweeneydan waxay nadiifisaa guryaha iyo xafiisyada, lacagta ay ka heshana nolosha qoyskeeda ayey ku maareysaa
Wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga Cabdinaasir Xikam oo u kuur galay arrimahaas, ayaa la kulmay dad ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee Itoobiya oo magaaladaas ku nool, isla markaana ka macaasha shaqooyinka ay Soomaalida ka faanaan.
Dadkii uu la kulmay waxaa ka mid ahayd haweeney sheegtay iney nadiifiso xafiisyada dowladda, lacagta halkaas ka soo gashana ay ku maareyso nolosha qoyskeeda iyo waxbarashada carruurteeda.
Marka ay dhammayso shaqada nadaafadda xafiisyada, waxay u sii gudubtaa guryaha ay Soomaalida deggan yihiin si ay shaqooyin noocaas ah uga qabato.
“Waa shaqo fiican waana ku faraxsanahay, walaalaheyga Soomaaliyeed ayaan u shaqeeyaa, waxaana xooggeyga ku qabtaa shaqada aan nolosheyda iyo tan reerkeygaba ku maareeyo” ayey tiri.
Haweeneydaas ayaa sheegtay in dhaqaalaha uga soo xarooda shaqadeeda nadaafadda ay ku bixiso kharashka ay labo gabdhood oo ay dhashay ku dhigtaan iskuul iyo Jaamacad.
Image captionShaqooyinka nadaafadda waxay ka mid yihiin kuwa ay ka faanaan Soomaalida Jigjiga
Deegaannada ay Soomaalidu ku dhaqan yihiin ee Itoobiya ama xitaa gudaha Soomaaliya, waa dhif iyo naadir in dadka Soomaalida ah ay shaqooyinkaas qabtaan ayna ku qancaan.
Meherad reysle ama timojare ah oo ku taalla magaalada Jigjiga, waxaa ka shaqeeya ilaa 7 nin oo dhammaantood aan Soomaali ahayn.
Mid ka mid ah ragga ka howl gala halkaas oo lagu magacaabo Fray Sigai Kiflu oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inuu timojare ahaa muddo ka badan 10 sano.
“Waa shaqo aan jeclahay, waxaan ka helay kharash aan ku guursado haddana waxaan ka biilaa reerkeyga” ayuu yiri isagoo ay ka muuqatay inuu aad ula dhacsan yahay xirfaddiisa.
Hase ahaatee inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed arrintaas dhankooda macquul kama aha.
Cabdiwali Axmed ayaa aaminsan in ka shaqeynta goob timaha lagu jaro ay tahay sumcad xumo.
“Shaqadaasi ma aha tii ay dhallinyarada ka shaqeysan lahaayeen, waayo ruuxa haddii uu sameynayo wax sumcaddiisa meel uga dhacaya waxaa u dhaanta isagoo shaqo la’aan iska jooga. Tusaale ahaan qofku hadduu timojare noqdo magaca ayaa ka xumaanaya waligiisna taasi ka hari mayso, weyna daba soconaysaa ilaa inta uu ka dhimanayo”ayuu yiri.
Cabdiwali ayaa sidoo kale qaba in shaqooyinka ceynkaas ah ay bulshada ku faquuqayaan.
“Waan baahanahay bakhti looma cuno ayaa la yiri, haddii la maqlo Cabdiwali waa timojare waxay ceeb ku noqonaysaa xaaskeyga iyo dhammaan qoyskeygaba” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
captionSoomaalidu marka ay qurbaha tagaan waxay qabtaan shaqooyinkii ay ka faani jireen
Dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu dhaliilaa in ay waddankooda uga cawdaan shaqo la’aan, isla markaana ku diidaan shaqooyinka ku xiran xirfadda, balse marka ay tagaan waddamada qurbaha ay dhinac iska dhigaan fikirkaas, ayna u tafa xeytaan shaqooyinkii ay horay uga aaminsanaayeen iney yihiin kuwo heer hoose ah ama sumcad darro ay la socoto.
Qaar ka mid ah dhallinyarada ayay danta ku kalliftaa in iyagoo tahriib iyo dhibaato badan u maray si ay dibadda u tagaan, ay haddana shaqooyinka ugu badan ee ay qabtaan noqdaan kuwa ay dalkooda ku diidi jireen.
Hase yeeshee dad horay ugu noolaa qurbaha oo Soomaaliya ku laabtay ayaa u muuqda iney is baddashay fikraddii hore ee ay ka qabeen shaqooyinka qaar.
Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dhallinyarada ugu badan ee ka soo barakacay Soomaaliya.
Abshir Cabdi Maxamed oo loo yaqaanno (Bwana Abshir) wuxuu qeybta nadaafadda uga shaqeeyaa mid ka mid ah maqaayadaha cuntada ee xaafadda Islii.
captionIslii waa xaafadda ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee qurbe deggan
Isagoo BBC-da la hadlayay ayuu yiri: “Sharafta waxay ku jirtaa in la shaqeysto, nooc walba oo ay ahaataba. Aniga noocyo badan oo shaqo ayaan soo maray, haddana waan ku qanacsanahay inaan nadiifiye ahaado, waayo waxaan ka helaa wax aan nolosheyda ku kaafiyo”.
Waan jeclaan lahaa inaan ka shaqeeyo shaqooyin heer sare ah laakiin mar walba shaqada aan helo waa inaan ka faa’iideysto, sababtoo ah meeshan waa Nairobi, qof kasta wuxuu u baahanyahay inuu helo lacag uu ku noolaado” ayuu intaas ku sii daray.
Maqaayadaha ay Soomaalida leeyihiin ee xaafadda Islii ayay intooda badan ka shaqeeyaan dhallinyaro Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay aad u soo badanayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysa meheradaha timaha lagu jaro.
Laakiin wali gudaha Soomaaliya, da’yartu waxay u muuqdaan kuwo aan u bisleyn xaqiiqda dhabta ah ee ku aaddan inaan shaqooyinka la kala soocin.